Ungakuthethelela kanjani ukwakheka kwe-imeyili okuphendulayo nokuthi ungaluthola kuphi usizo! | Martech Zone
Kuyethusa impela kodwa abantu abaningi basebenzise i-smartphone yabo ukufunda i-imeyili ukwedlula ukwenza izingcingo (faka ukubhuqa mayelana nokuxhumeka lapha). Ukuthengwa kwezinhlobo zezingcingo ezindala kwehle ngo-17% unyaka nonyaka kanti osomabhizinisi abengeziwe abangama-180% basebenzisa i-smartphone yabo ukubuka kuqala, ukuhlunga nokufunda i-imeyili kunakwiminyaka embalwa eyedlule.
Inkinga, nokho, ukuthi izinhlelo zokusebenza ze-imeyili azithuthukanga ngokushesha njengeziphequluli zewebhu. Sisabambeke kumakhasimende wewebhu wedeskithophu afana ne-Outlook ancike ku-HTML endala ukunikeza i-imeyili kahle. Amaklayenti e-imeyili amasha azonikeza izinguqulo zakamuva ze-HTML ne-CSS kahle, avumele okuhlangenwe nakho kwe-imeyili okumangazayo. Akulula ukuthumela i-imeyili futhi uyinikeze kahle ekukhetheni okukhulu kwama-smartphones, amaphilisi, iwebhu, namakhasimende wesoftware.
Kubalulekile ukusebenzisa injini yokuhlola efana ne- I-Litmus (sikuhlanganisile ne ipulatifomu yokulethwa enama-250ok, umlingani). I-imeyili ephendulayo iyinhlanganisela ye-HTML, i-CSS ne-HTML entsha yesikole esidala. Ukufometha kanye nokuhleleka kwekhodi yakho ye-imeyili kubalulekile ukukhulisa ukufundeka kuzo zonke izindawo zokubuka.
Landa Izibonisi Zama-imeyili Eziphendulayo Zamahhala
Uma i-ESP yakho inganikeli ngesifanekiso esiphendulayo, kunezinsizakusebenza ezimbalwa ku-inthanethi ukuthola usizo nge-imeyili ephendulayo:
I-Zurb - ushicilele uchungechunge lwezifanekiso ze-imeyili eziphendulayo.
Thumela i-imeyili ku-Acid - Inikezela ngochungechunge lwezifanekiso zamahhala zama-imeyili ukukukhuphula futhi usebenze ngokushesha okukhulu.
I-Litmus inokukhetha okwakhiwe ngu- I-Stamplia ongayilanda nama-PSD ahambisanayo.
I-Mailchimp ushicilele izifanekiso ezithile eziphendulayo ku-Github. Futhi I-Respmail ungeze ukuthuthuka kwabo.
Izinsizakusebenza ze-imeyili eziphendulayo - Iqoqo lamathuluzi nezinsiza zokwakha i-imeyili ephendulayo.
I-Themeforest inokukhethwa okukhulu kweminikelo ekhokhelwayo emangalisayo kanye namafayela nemiyalo ye-Photoshop.
Izinsizakalo Zokwakhiwa Kwe-imeyili Nekhodi Ephendulayo
Abaphezulu - uma udinga idizayini entsha noma unomklamo odinga amakhodi, abantu base-Uplers benze umsebenzi omuhle kumakhasimende ethu ambalwa!
Highbridge - uma unenkinga eyingqayizivele odinga usizo ngayo, unganqikazi ukufinyelela!
Highbridge - uma uyi-Marketing Cloud noma iklayenti le-Pardot futhi ubheka ukusebenzisa ukwakheka okusha kwe-imeyili, izifanekiso, nezifanekiso ze-imeyili ezabiwe, sazise.
Njengabathengisi be-imeyili, ukwakheka okuphendulayo kube yisihloko esishisayo iminyaka eminingana njengoba lokhu kukhula okungenakulinganiswa sekuqoqe umusi. Manje sesifinyelele eqophelweni lapho ukwakhiwa kwe-imeyili okuphendulayo, i-IS design email! Ku-infographic yakamuva ye-Instiller, sihlanganise inqwaba yezibalo ezithinta amehlo ezigcizelela ukubaluleka kokudla kwabasebenzisi beselula ngokuxhumana kwakho kwe-imeyili.
USteve Painter, Isifaki
Isifaki ngumhlinzeki wesevisi ye-imeyili owakhelwe ngokukhethekile izinhlaka ezinikeza isisombululo esiphelele se-imeyili sokuklama, ukuthumela nokubika nge-imeyili ethunyelwe amaklayenti abo (afaka namathuluzi athile wokuletha kanye nokuqapha idumela).
Abantu baseLitmus bahlanganise le ndatshana emnandi ye-infographic nehambisana nayo, I-How-To Guide to Design Design ye-imeyili.
Tags: 250okamnandiIsixazululo se-imeyili se-ejensiumakhi we-imeyiliukwakheka kwe-imeyiliizindela ze-imeyiliimeyili ku-asidii-imeyili yokubukaGitHubumfakelii-litmusi-mailchimpi-neteffektukuphendulai-imeyili ephendulayoumakhi we-imeyili ophendulayoukwakhiwa kwe-imeyili okuphendulayoizifanekiso ze-imeyili eziphendulayozurb